Iyo iPhone X ichave neReachability basa | IPhone nhau
Iri ibasa risingazive nevazhinji asi iro avo vanorishandisa havadi kurasikirwa naro. Reachability (muchiSpanish inonzi Easy Scope) Yakaunzwa neiyo 5,5-inch iPhone seimwe nzira kune avo vaida kuramba vachishandisa nharembozha neruoko rumwe, uye vazhinji vakatya kuti iyo iPhone X yaisazove nayo. Zvakanaka, zvinoita sekunge zvichadaro.
Yakave yakawanikwa neanogadzira Guilherme Rambo, uyo akatoburitsa pachena zvakawanda zveiyo nyowani iPhone munguva yakapfuura nekuda kwekodhi yeIOS 11 uye Xcode, uye ave nevekupedzisira iye akatiratidza kuti iyo iPhone X ichaenderera sei kuchengetedza iri basa.
Iri ibasa, kune avo vasingazvizive, izvo zvinokutendera kuti udzikise chidzitiro nekubata bhatani rekutanga kaviri, usinganyatso kumanikidza. Izvi zvinogadzira pamusoro pechidzitiro izvo zvinonetsa kuwana neruoko rumwe mukati mekusvika nyore., uye chiratidzo icho vashandisi vazhinji vanoshandisa kazhinji. Kurasika kwebhatani rekutanga kwakaita kuti titye kuti basa iri raizonyangarika, Apple ichipokana kuti yakanga isisina basa sezvo chishandiso chacho change chiri chidiki pane Model Plus, asi zvinoita sekunge hazvizove zvakadaro uye ticharamba tichiva nazvo.
Izvo izvo zvino zvinoramba zvichizivikanwa ndezvekuti chiiko chiratidzo chinofanirwa kuitwa kuchishandisa. Iyo mbiri pombi pabhawa yepasi inoita kunge inorambidzwa kunze, nekuti sekureva kwenyanzvi kuti basa harigoneke munzvimbo iyoyo. Vazhinji vanotaura nezvekushandiswa kwe3D Kubata kana chiratidzo chekutsvedza pasi pebhawa repasi. Ngazvive sezvazvingaite, zvinoita sekunge Reachability icharamba iine hupenyu hwakawanda kumberi kunyangwe iine iPhone X, yakanakisa nhau kune imi mese makati Apple haina kuibvisa kubva kumagumo ayo. Inosara chete kuti izosimbise neiyo iPhone X iri muruoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iyo iPhone X ichave neReachability basa
Iyo iOS 11.1 beta haigadzirise incipient bhatiri matambudziko chero
Apple inotsanangura zvakadzama mashandiro eiyo nyowani Face ID